काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकामा निर्वाचन माहोल एक्कासि तातेको छ । महाअभियोग र प्रमुख दलहरुबीचको चुनावी तालमेलले राजनीतिक वातावरण तताइरहेका बेला काठमाडौँ महानगरमा कसले बाजी मार्ला..
कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिको राजीनामा फिर्ता, आजैदेखि गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने
काठमाडौं । गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधि पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किने भएका छन् । बिहीबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेपछि निधि राजीनामा फिर्ता लिन..
काठमाडौं । बैशाख ३१ हुने पहिलो चरणको चुनावका लागि आज देशका तीन प्रदेशमा उम्मेदवारको मनोनय शुरु भएको छ । ३ वटा प्रदेशका २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा पहिलो चरणको..
सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउन पाउँछ तर आयोगको परामर्शमा मात्र
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जेठ १५ मा बजेट ल्याउन निर्वाचन आचार संहिताले नरोक्ने बताएका छन् । सरकारले जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगले सोमबार पत्रकार..
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको एक मात्र नगरपालिका सोलु दूधकुन्ड नगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवार बन्न नेकपा एमालेका नेता आङ दामी शेर्पाले अमेरिकी स्थायी बसोवास अनुमति पत्र ुपीआरु परित्याग गरेका छन् । प्रमुखको आकाङ्क्षी..
प्रचण्ड सरकारको १०३ बुँदे उपलब्धी कस्ता छन् ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता र राष्ट्र प्रतिको गम्भीर जिम्मेवारी बोध र क्रियाशीलताका कारण ८ महिनाको छोटै अवधिमै सरकारले देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मारेको दाबी गरेका छन् ।..
बर्दिवास नगरपालिकामा नयाँ शक्तिसहित ९ दलको संयुक्त प्यानल
बर्दिवास । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिकामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नौ दलले संयुक्त प्यानल दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी),..
अरुण नदी थुनिएर तीन किलोमिटर ताल बन्यो, बस्ती जोखिममा
काठमाडौं । संखुवासभाको अरुण नदी थुनिदाँ बस्ती जोखिममा परेको छ। बिहीबार दिउँसो ४ बजेतिर बरुण नदीमा पहिरो आएपछि संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका अन्तर्गत स्याक्सीला गोलामा पर्ने अरुण नदी थुनिएको हो। अरुण..
यातायातमा साढे ५६ करोड अनियमितता, बचाउन ठूलो दबाब, कसरी खुल्यो पोल ?
काठमाडौं । कोसी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले तीन वर्षमा साढे ५६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अनियमिततामा संलग्न कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नयराज नेपालसहित पाँचजना कर्मचारीलाई निलम्बन..
पार्टी एकता गर्न मधेसी मोर्चाका पाँच दल सहमत, आजै एकिकरण हुने
काठमाडौं । मधेसी मोर्चामा आवद्ध पाँच दलबीच एकता हुने भएको नेताहरुले बताएका छन् । दिउँसो १ बजे पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम राखिएको छ । बुधबार राति अबेरसम्म भएको वार्तामा पार्टीको नाम..
​राजस्व दाखिलामा अनियमितता गर्ने यातायातका पाँच कर्मचारी निलम्बित
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले राजस्व दाखिलामा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै पाँचजना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका कार्यालय प्रमुख नयराज नेपाल, लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारी, लेखापालद्वय सुरेश..
नयाँ दिल्ली । भारतीय उद्योगपति विजय माल्या लण्डनबाट पक्राउ परेका छन् । गत फेब्रुअरी महीनामा नै भारत सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न बेलायत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । बैङ्किङ कसुर र..
चौधरी फाउन्डेसनले पनि एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने
काठमाडौ । चौंधरी फाउन्डेसनले सिन्धुपाल्चोेक जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ । चौंधरीले फाउन्डेसनले स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, विभिन्न तालिम केन्द्रहरुसहितको एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको हो । फाउन्डेसनले..
बनेपा । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको गैरन्यायिक हत्याको मुद्दामा अदालतले झन्डै १० वर्षपछि तत्कालीन तीन सैनिक अधिकारीलाई २० वर्ष जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला अदालत, काभ्रेपलाञ्चोकका न्यायाधीश मोदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले वीरेन्द्र..
चितवन । भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा यहाँका भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरणका लागि मङ्गलवारदेखि सम्झौता थालिएको छ । भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने हालको इच्छाकामना गाउँपालिका साविक दारेचोक गाविसमा एक..
आजदेखि थप १७ जिल्लामा पहिलो किस्ता वितरण गरिने, कास्कीको लुम्लेबाट अनुदान वितरण शुरू
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सोमवारदेखि भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदानवापतको पहिलो किस्ता वितरण शुरू गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले सर्वेक्षण गरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकालाई..
​केन्द्रमा बढीमा सोह्रवटा मात्रै मन्त्रालय रहने
काठमाडौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र..
सुनपछि विमानस्थलबाट महिला तस्करी, अध्यागमन कर्मचारीकै मिलेमतो
काठमाडौँ । अवैध रुपमा घरेलु कामदारका रुपमा महिलालाई खाडी राष्ट्रमा पठाउने कार्यमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको संसदीय टोलीले जनाएको छ । खाडीका साउदी अरब, कुबेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०..
सङ्घीयताको उपहार, दैलोमा अधिकार
जुम्ला । सरकारले गत फागुन २७ गते स्थानीय निकाय विघटन गरेलगत्तै जिल्ला विकास समिति, जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भयो । नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत तोकेर..
दशगजामा भारतीय पक्षको मनपरी, कुलो खनेपछि सशस्त्रले पुर्न लगायो
बर्दिया । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–५ मा पर्ने नेपाल–भारतको सीमा दशगजामा भारतीय वन विभागका कर्मचारीले कुलो खनेपछि नेपालको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल, सानोश्रीले उक्त कुलो पुर्न लगाएको छ । कतर्निया वन्यजन्तु..
चिनियाँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भेट : पूर्वाधार विकास, रेल्वे र तातोपानी नाका खोल्ने चिनियाँ चासो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच पैचिङमा भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सीसँगको भेटपछि प्रतिक्रिया दिंदै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग धेरै उत्साहका साथ खुल्ला र..
बेइजिङ। चीनको भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम खर्च गरेर मनग्य आर्जन गर्न सकिने उपयुक्त अवसर नेपालमा रहेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । चीनको बेइजिङ्मा सोमबार आयोजना..
विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न जिल्लामा पनि अभियान, विद्युत चोरी गर्दागर्दै २० पक्राउ
झापा । झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गाबाट विद्युत् चुहावटमा संलग्न सात महिलासहित २० जनालाई पक्राउ परेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अनारमनी वितरण केन्द्र र इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीको संयुक्त गस्ती टोलीले..
सवा १५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल आइतबार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब २६ करोड २५ लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिल विक्री गर्ने भएको छ । ९१ दिने अवधिको नौ अर्ब, १८२ दिने अवधिको चार अर्ब ३० करोड..
स्वर्गद्वारी जाँदै गरेको जिप प्यूठानमा दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु
प्यूठान । धार्मिक तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी जाँदै गरेको बा ८ च १५६१ नंको स्कार्पियो जिप दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीनजना गम्भीर घाइते भएका छन् । काठमाडौँबाट स्वर्गद्वारी दर्शनका..
राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पारित, ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्ले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ पारित गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबार बसेको बैठकमा बहुमतले यो विधेयक पारित गरेको हो । नेमकिपाका सांसदको..
सर्वोच्चद्वारा जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय बदर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई..
रोन क्यामेराबाट लिइएको वाग्मतीमा फोहोर फाल्नेको तस्वीर कारवाहीका लागि पठाइयो
काठमाडौं । ड्रोन क्यामेराबाट लिइएको तस्बिर प्राप्त भएपछि नदी किनारलाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुने अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ । दक्षिण कोरियाको सियोल विश्व विद्यालयबाट आएको ड्रोन..
यि हुन गाउँपालिका कार्यालयहरुका कार्यकारी अधिकृत
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न गाउँपालिका कार्यालयहरुमा कार्यकारी अधिकृत तोकेको छ । मन्त्रालयले बिहिबार ४८१ गाउँपालिका कार्यालयहरुमा कार्यकारी अधिकृत खटाएको हो । निर्वाचन आयोगले बिहिबारसम्म गाउँपालिका र..
किन लिए पासपोर्ट, कहाँ गए साढे चार लाख महिला ?
काठमाडौं । गएको सात वर्षमा राहदानी (पासपोर्ट) लिएका चार लाख ५९ हजार ५४२ महिलाले कुन कस्तो प्रयोजनका लागि राहदानी लिए भन्ने यकीन हुनसकेको छैन । आजको गोरखापत्रमा खबर छ । राहदानी..
Results 1994: You are at page 37 of 67